Payraise क्यालकुलेटर AJAX संस्करण समाप्त! | Martech Zone
आइतबार, अक्टोबर 1, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
अनुरोध वेतन कैलकुलेटर
तपाईलाई जहिले पनि थाहा हुन्छ जब म केही दिनको लागि हराउँछु - यसको मतलब यो हो कि म धेरै क्याफिन लिइरहेको छु र मेरो दिमाग बाहिर कार्यक्रम गर्दैछु। मैले पहिलो पटक पाएको एउटा परियोजनाले माइक्रोसफ्ट एक्सेस २.० मा कर्मचारी प्रदर्शन डाटाबेस प्रोग्राम गरिरहेको थियो! मैले यसमा थपेको एउटा सुविधा (किनकि हाम्रो मानव संसाधन विभागले सबै मानहरू भर्न आवश्यक छ) एक वेतन वृद्धि क्यालकुलेटर थियो। मैले डाटाबेसमा फारमको रूपमा प्रोग्राम गरे र परिणामहरू रिपोर्टमा छापिए।
त्यो अनुप्रयोग संस्करणहरूको लागि धेरै भिजुअल बेसिकमा विकसित भयो, भिजुअल बेसिक संस्करण, र त्यसपछि मैले डोमेन नाम खरीद गरें र जाभास्क्रिप्ट संस्करण धेरै बनायो, धेरै चन्द्रमाहरू पहिले। AJAX र Web2.0 अनुप्रयोगहरूको आक्रमणको साथ, मैले AJAX संस्करण रोल आउट गर्ने निर्णय गरें। मैले यसलाई शुक्रबार राती सुरू गरेर आज समाप्त गरें। मेरो डेस्क खाली स्टारबक कपहरू, PHP पुस्तकहरू, AJAX र जाभास्क्रिप्ट पुस्तकहरू ... द्वारा सबै सोधिएको छ जुन सबै एक समय वा अर्कोमा काममा आयो।
मैले ड्रीमविभर प्रयोग गरेर यो साइटलाई स्क्र्याचबाट निर्माण गरें (म एक ओएल छु 'स्कूल नोटपैड केटा हो ... तर मैले यसलाई शट दिने निर्णय गरें)। मैले इलस्ट्रेटरमा ग्राफिक्स गरें। मैले फ्रन्ट-एन्ड १००% को लागी CSS प्रयोग गर्‍यो, र प्रिन्ट CSS संस्करण पनि छ (अगाडि बढ्नुहोस् र परिणामहरू प्रिन्ट गर्नुहोस् र तपाईले देख्नुहुनेछ)। फ्रन्ट एन्ड 100 37 सिग्नलहरू द्वारा प्रेरित थियो ... राम्रो र सरल, तर अलि सुरुचिपूर्ण। मँ अझै पनी तालिकामा नतिजा देखाउँछु - तर त्यो उद्देश्य मा छ किनकि म चाहान्छु कि एक्सेल वा अरु कुनै पोग्राममा नतिजाहरुलाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्न। एप्लिकेसनको बारेमा धेरै राम्रा कुरा छन्। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ!
मलाई कुनै पनि बगहरू रिपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोस्! अर्को चरण ब्याक-एन्डको लागि निश्चित रूपमा प्रयोग गरी एउटा खोज खोज इञ्जिन एकीकृत गर्दैछ। शायद अर्को सप्ताहन्त!